Umthetho omtsha wolwandiso lwewaranti uneempembelelo ezininzi kwiApple (kunye nabanye). | Ndisuka mac
Umthetho omtsha wolwandiso lwewaranti uneempembelelo ezininzi kwiApple (kunye nabanye).
ISpain ithathe inyathelo eliya phambili ngokuvunywa koMthetho omtsha oza kulawula, phakathi kwezinye izinto, ukwandiswa kwemigaqo yesiqinisekiso seemveliso ezintsha. Okwangoku bakwiminyaka emibini kodwa baya kwandiswa baye kwabathathu. Kodwa kuninzi okungakumbi kulo Mthetho mtsha oya kuba nefuthe kuApple kwaye ngenxa yoko kubasebenzisi bokugqibela. Nokuba uthenga iMac okanye i-iPad ukusuka ngo-2022 iwaranti iya kwandiswa ukuya kwiminyaka emi-3 kwaye umenzi uya kucelwa ukuba ahlangabezane nezibophelelo ezintsha.
Ngoku iApple kuya kufuneka ibonelele ngesiqinisekiso seminyaka emithathu kwiimveliso ezithengiswa eSpain. ICandelo loMphathiswa Wezemicimbi Yabathengi lisandula ukuvuma umgangatho omtsha wokukhusela abathengi. Emva kokupapashwa kwayo BOE, 'Umthetho Jikelele woKhuselo lwaBasebenzisi naBasebenzisi'Ihlaziyiwe ukuze ibandakanye amanyathelo ezikhokelo zaseYurophu. Ummiselo omtsha owandisa ukuhanjiswa kweemveliso ukusuka kwiminyaka emibini ukuya kwemithathu.
Kodwa kukho okungakumbi. Okuninzi.
1 Iwaranti yeminyaka emithathu. Isalathiso sokulungiswa kunye neendawo zokugcina izinto iminyaka eli-10. Oku kutshiwo ngumthetho omtsha
2 Konke oku kuya kuchaphazela iindleko zeemveliso. Oko kukuthi, iApple inokunyusa amaxabiso ezixhobo
Iwaranti yeminyaka emithathu. Isalathiso sokulungiswa kunye neendawo zokugcina izinto iminyaka eli-10. Oku kutshiwo ngumthetho omtsha
Umthetho awusayi kusebenza de NgoJanuwari 1 we-2022 nangona sele ipapashiwe kwi-BOE. Lo Mthetho uhambelana nemfuno yaseYurophu kwaye ayibonisi kuphela ukuba ixesha lewaranti yeemveliso ezintsha ezithengiweyo kufuneka zandiselwe ukuya kwiminyaka emi-3, ebalwa ukususela ngexesha lokuziswa kwemveliso. Ukongeza, iApple iya kucelwa ukuba ibenendawo yokugcina izinto ubuncinci iminyaka eli-10, hayi ezo zintlanu njengoko bekufuneka ukuza kuthi ga ngoku. Ndicinga ngoku ukuba akukho kungxama ukuthenga izixhobo ezithile, sinokulinda unyaka omtsha.
Kusekho okuninzi. Ixesha liyandiswa ukuze likwazi ukurhoxa kwimveliso engasebenziyo kwaye umthengi ngekhe abonise ukungasebenzi kakuhle. Kude kube ngoku yayiziinyanga ezintandathu, ixesha liyandiswa ukuya kwiminyaka emibini.
Ukushwankathela: Umgaqo omtsha osebenzayo ukonyusa ilungelo lokufumana isisombululo ukusuka kwiminyaka emibini ukuya kwemithathu, nokuba kunjalo ukulungiswa okanye ukutshintshwa kwayo. Ngaphambili, ubunenyanga ezintandathu ukuthintela ukungqina ukuba imveliso ayiphumelelanga, ucinga ukusilela komzi-mveliso. Ngoku elo xesha liba yiminyaka emibini. Ukusuka apho, kunyaka wesithathu, inkampani inokucela uluvo lwesibini lweengcali.
Yintoni ebizwa njenge ukulungiswa kwesalathiso (into endisele ndiyenzile iFixit kunye neemveliso zeApple): Ukulinganiswa ukusuka kwi-0 ukuya kwi-10 ukulungiselela ukulungelelaniswa kweengxenye okanye ukukhutshwa kwezinto. Isalathiso esele sisetyenziswa eFrance ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, kodwa apho eSpain ayikabhengezwa khona ukuba iya kuqala nini ukufaka isicelo. Abavelisi kufuneka babeneendawo zokungcebeleka ezikhoyo ubuncinci iminyaka eli-10, kabini iminyaka emihlanu ukusuka kumhlala-phantsi wabo ofunwa ngumthetho. Ukuba iMac iyeka ukwenziwa ngo-2021, kuyakubakho iinxalenye de kube ngu-2026 kodwa ukuba iyeka ukwenziwa ngoJanuwari 1, 2022, kude kube ngu-2032 siyakuba neenxalenye zokugcina. Kwaye nge-iPhone, i-iPad, imoto, umatshini wokuhlamba ... njl.
Konke oku kuya kuchaphazela iindleko zeemveliso. Oko kukuthi, iApple inokunyusa amaxabiso ezixhobo
Kuxhomekeke kubathengisi ukuba bajonge inkcitho ukuze konke oku kungentla kufikeleleke kwaye kufikeleleke kumthengi. Kufuneka simahla. Oku kuthetha ukuba iya kuba luphawu oluya kuthatha isigqibo sokuba lonyuse amaxabiso kwiimveliso zalo. Oko kukuthi, njengesiqhelo, ukuba yonke le nkcitho intsha yenkampani iwela kumthengi wokugqibela okanye ukuba kuthathelwa ingqalelo kule meko siyikhathaleleyo, iApple. Iindleko ngokucacileyo ziya kuba phezulu.
Ngoku, kuyacaca ukuba ukongezwa kwesiqinisekiso kunokuchaphazela amaxabiso, kodwa oko kunokuba yinto encinci kwaye Akufanele siwubone umahluko phakathi kwamaxabiso angama-2022 ukuya kuma-2021.
Iindaba ezimnandi ke ngoko. Kuya kufuneka silinde kude kube ngu-2022 ukuthenga ezo mveliso ze-Apple zihlala zibiza kakhulu kwaye kunzima ukuzilungisa. Kwaye iMac entsha ene-M1 kufanelekile ukulinda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umthetho omtsha wolwandiso lwewaranti uneempembelelo ezininzi kwiApple (kunye nabanye).
Vula ukubhuka kwe-iMac entsha ene-intshi ezingama-24
Eminye imibala ye-iMac entsha iya kufumaneka kuphela kwi-Intanethi